Ini Ndakadzima Yangu Inodhura Webhusaiti Kubika uye Kuongorora Zvishandiso zveDiib | Martech Zone
Ini ndakadzima Yangu Inodhura Webhusaiti Kubika uye Kuongorora Zvishandiso zveDiib
Chishanu, May 22, 2020 Chishanu, May 22, 2020 Douglas Karr
Nemari yakarasika inosanganisirwa neCOVID-19, ini ndaitofanira kuongorora zvakare zvigadzirwa zvandaishandisa kutsvaga, kuongorora, kurondedzera, uye kugadzirisa masayiti angu neavo vevatengi vangu. Ini ndaive kushandisa anoverengeka mazana emadhora pamwedzi neakawanda mashoma maturusi ekuita izvi. Zvakare, chimwe nechimwe chezvishandiso chaive nematoni emishumo uye sarudzo - asi ini ndaifanira kuzama nedata kuti ndiwane rairo rinoshanda randaigona kushandisa kukwidzirisa masayiti.
Mune mamwe mazwi, ini ndanga ndichibhadhara tani yemari… uye ndisinganyatso kuwana mhinduro dzandaida. Ini ndakaseka pamusoro peizvi munguva yakapfuura… kuti analytics maturusi ari chaizvo akarurama mubvunzo engines uye kwete mhinduro injini. Zviri kwauri iwe semuongorori kuti uone uye nekuisa pamberi mikana yacho mushure mekunge iwe wachera mune iyo data, chidimbu, sefa, uye enzanisa hunhu hwevashanyi.
Ini ndoda kujekesa apo ini ndichitsanangura ichi chigadzirwa chandakawana - diib. Iko kune chaiko zviuru zvezvinhu iwe zvaungaite newebhusaiti kuvandudza kuonekwa kwayo, kukura, uye shanduko. Kumwe kwekuwongorora kunogara kuchida kuti mumwe munhu ashandure dhata kuita zviito.
Diib: Mhinduro Injini
Iyi vhidhiyo kubva diib pavakavhura makore mashanu apfuura vachipa imwe nzwisiso papuratifomu uye kuti ingabatsira sei bhizinesi rako:
Ndakanyoresa mahara diib account uye akakurumidza kushamisika nehungwaru mhinduro iyo chikuva chaitove ichipa mukati memaminetsi ekusaina. diib inotanga nekuongorora webhusaiti yako uye kuona mikana mikuru yekukudza kutengesa kwako. Diib inoputsa kuita mana makuru mhinduro:
Pindura Injini - chishandiso chine simba chekuongorora chinozotarisa saiti yako uye nekuuya nehurongwa hwekukura hwakagadziriswa nekungokupa mhinduro.
Analytics - diib hazvingoremedze data, vanozvishandura kuita chaiwo madhora emabhizimusi ako apfuura, aripo, neramangwana. Iwe unogona zvakare kuona kuti iwe unokomberedza sei mune yako indasitiri.
Kufambira Mberi Tracker - Chengetedza zvese zvaunoedza uye kudzidza kuti iwe ugone kuona kuti wakasvika sei! Kuwedzera kufambira mberi kwaunoona, iwe unowedzera kuramba uchienderera!
Kudzidza Raibhurari - Kana iwe uri unozviita-iwe-wega mushambadzi, Diib zvakare ane matipi, maturusi, uye tutorials pamunwe wako. Ivo vane raibhurari yakakura ye1000s yemavhidhiyo, zvinyorwa, machena mapepa, uye maebook.
Diib inonunura yakapusa, yakakwira-kukanganisa kuongorora, kuburitsa, uye zvinoonekwa kukuzivisa iwe zvauri kuita uye zvaunofanira kuita zvinotevera. Ne diib ™ iwe unoziva yako saiti kukosha kwegore uye nemabatiro ari kuita bhizinesi rako pamhepo muindasitiri yako. Uye diib inogadzira yetsika yekukura chirongwa cheako bhizinesi kuvepo pamhepo.
Tarisa Hwebsite Yako Hutano
Pakati pekuzivisa ndeyekutanga kusimbiswa kwekuti webhusaiti yako ine hutano chaizvo. Diib inoita izvi nekuongorora izvi zvakakosha zvewebhu webhusaiti:
SSL Chitupa: Iwe unogona kunge usina saiti yakachengeteka kana yako SSL chitupa chisina kuiswa nenzira kwayo. Diib's injini yekutsvagisa yakasarudzika kana zvasvika pakuchengetedza uye inokuzivisa iwe kana ikaona chero zvikanganiso zvakakosha zvakakwana kuti zvingakanganisa masosi ako kana kukonzera yambiro mubrowser yemushanyi.
Mobile Yekumhanyisa: Mhinduro Injini inotarisa yako nhare yekumhanya zuva nezuva. Kana paine nyaya nefoni yako inomhanya, iyo Diib ichakuzivisa.
Domain Authority / Backlinks: Mifananidzo iyi inokuudza yako yazvino Moz Domain Authority uye huwandu hweshure hwemashure kumashure anonongedzera kuwebsite yako. Iwe unogona zvakare kuona rondedzero yeako akakosha backlinks.
Facebook / Google Bhizinesi Rangu Kubvumirana: kana usati waenzanisa izvi zviviri zvakakosha data zvinyorwa, Diib inokuzivisa iwe kuti urege kupotsa pane zvakakosha zvinangwa uye kunyeverwa!
Sitemap: Iyi scan inokuudza iwe kana kuti kwete isu takaona sitemap yewebhusaiti yako. Sitemaps dzinobatsira Google uye dzimwe injini dzekutsvaga dzinokambaira webhusaiti yako.
Keywords: Izvi zvinokuudza kuti mangani mazwi akakosha ako webhusaiti akaiswa mugoogle. Unogona kuona kusvika pamakumi mashanu emazwi ako akakosha.
Blacklist: Iyi webhusaiti uye IP kero scan iyo inokuudza iwe kana kwete maemail ako ari kuendeswa kumabhokisi emabhokisi evatengi vako. Kana diib inoona kuti maemail ako anogona kunge achienda kumabhokisi e-spam pachinzvimbo chemabhokisi emabhokisi ivo vachakuzivisa pamwe nekubatsira iwe kugadzirisa dambudziko.
Tsvaga, Zvemagariro, Nhare, uye Zvemuno Zvinangwa
Kana ndangomisa yangu saiti, diib yakanga yakabatana neGoogle Analytics, Google Bhizinesi, uye Facebook kupa tsvakiridzo, zvemagariro, nhare, uye zvebhizinesi zvemuno. Ipuratifomu ipapo yakaratidza zvimwe zvinangwa zvekuti ini ndiongorore pamwe nehumwe hukuru hukama kuti ndidzidze kuti:
Diib akaongorora maficha epaFacebook kuti aone kana zvinyorwa zvangu zvichizonyanya kukuvadza.
Diib ndaive nehungwaru hwaindiratidza kuti COVID-19 yanga isiri kukanganisa traffic yangu yese webhusaiti.
Diib yakaratidza zvimwe zvemukati zvakaputsika zvinongedzo kuti ini ndigadzirise.
Diib yakaratidza mamwe backlinks angave aine chepfu ini wandingade kurega.
Dhiib Kukosha Kunoshamisa
Vanonatsa vachati maturusi akadai haana kukwana zvakakwana. Zvichida ichokwadi kumatunhu akakura, akaomesesa mumaindasitiri anokwikwidza zvikuru. Asi ruzhinji rwemabhizinesi harushande kwavanoda kutarisa mativi ese ekuvapo kwavo pamhepo… ivo vari mubishi kumhanyisa mabhizinesi avo.
Pamutengo wezita we diib, kukosha kwacho kwakapfuura huwandu hwakawanda hwemapuratifomu kunze uko. Iko hutano hwekutarisa, kukosheswa, kufungidzira, zvinangwa, uye chenjedzo zvinochengeta wepakati saiti muridzi akabatikana mukati megore rekuvandudza kukura kwavo webhusaiti uye kukura kwebhizinesi ravo.
Iyo yemahara diib account inopa:
Yakatemerwa Kukura Chirongwa - Kushomeka kuwana kune akangwara ezuva nezuva kunyevera uye zvinangwa zvinokuratidza maitiro ekukurumidza kukura traffic & mari
Website Monitoring - Tora zviyeuchidzo zvemadonhwe emigwagwa asina kujairika, zvakaputsika kana spammy backlinks, nyaya dzekuita, chengetedzo, kana kunyange Google yekutsvaga algorithms inogadziridza! Yambiro yega yega inosanganisira matanho anoshanda ekugadzirisa nyaya.
Yevhiki nevhiki Snapshot email - Ramba uine ruzivo nezve mikana yekukura uye zvinogona kuita nyaya.
Mazuva ese Hutano Score - diib's smart algorithm inoona mamiriro ewebhusaiti yako munguva chaiyo.
Benchmarking - kuenzanisa kwewebsite yako kuita kune mamwe mawebhusaiti mune yako indasitiri.
A diib Pro account inodhura $ 19.99- $ 29.99 / mwedzi zvichienderana newebhusaiti traffic uye inopa zvese zviri mahara account, pamwe ne:
Kukura Kwekuronga - Kuwana kuzere kwezuva nezuva zviyeuchidzo & zvinangwa zvinokuratidza maitiro ekukurumidza kukura traffic uye mari.
Kusvika kumawebhusaiti makumi matatu - Ona kuti mawebhusaiti ako ese ari kuita sei pachiratidziri chimwe.
Unyanzvi hwehunyanzvi chero nguva - Yemahara 24/7 kuwana kune yakazvipira yekukura nyanzvi.
evanhu vezvenhau - diib inotarisa yako chaiyo mashandiro uye inokupa iwe netsika nzira mepu yekukura iyi yakakosha nzira.
SEO & mazwi akakosha - Kuongorora & kugadzirisa mazano zvichienderana neprimiyamu Moz & Semrush date.
Tarisa yako Webhusaiti Hutano Izvozvi!
Kuzivisa: Isu tiri vanobatana vanozvikudza ve diib.
Tags: injini yekupinduraCOVID-19diibongororo yegooglegoogle analyticsgoogle bhizinesi ranguip blacklistmobile analyticskukurumidza kumhanyatsvaga analyticszvemagariro analyticsSslwebhusaiti yekutarisawebsite optimization